Laser umsiki, Laser engraver, CNC Laser umsiki - Mingjue
Max 20W Ikhava Okugcwele Fibre Laser Ukumaka Machine ...
30W Uxhumano Fibre Laser Ukumaka Machine nge ...
50W Raycus Ihlukaniswe Fibre Laser Ukumaka Machine ...
Raycus 30W IKhabhinethi Fibre Laser Ukumaka Machine ...
55 x 35-1 / 2 Inches 130W CO2 Laser Engraver kanye ...
I-Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD yinkampani yokuhlanganiswa kwezezimboni nezohwebo eyakhiwe ngo-2016. Sisebenza ngokubambisana nama-manufactories amathathu aphezulu ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme emhlabeni. Selokhu inkampani yamiswa, sisebenze kanzima ukuba ngumholi embonini yokuqopha i-laser, ukusika nokumaka. Singabantu abasha. Singabaxazululi bezinkinga. Sizibophezele ukuklama nokuhlinzeka ngezinhlelo ezisezingeni eliphakeme kakhulu ze-laser emhlabeni.
Izindaba Zokuvakashelwa Kwamakhasimende
Likuphi uhla lwethu lwebhizinisi: Kuze kube manje sesisungule ama-prosy ejenti e-Algeria, Egypt, Iran, South Africa, India, Malaysia nakwamanye amazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia. Futhi eMiddle East naseNingizimu Melika. Sinozakwethu nenani elikhulu lamakhasimende.
Amathiphu wokuthenga umshini wokusika / wokuqopha we-laser
Isinyathelo 1: Udaba Lokuqala Ukusekelwa. Kunokungeniswa okuningi okushibhile, ikakhulukazi okuvela eChina, emakethe. Kepha ama-lasers yimishini eyinkimbinkimbi futhi ayaphuka futhi adinga ukulungiswa. Qiniseka ukuthi ...
I-Laserartist CO2 imishini yokuqopha i-laser inikeza amathuba amaningi. Isebenza ngezindlela eziningi kune-router engravers noma imishini yokugaya, i-CO2 laser engravers ingenza ngezifiso ngokushesha nangokulula ...
5 Izici eziyinhloko ezithinta ikhwalithi yokumaka yomshini wokumaka we-laser
Ukusebenza komshini wokumaka i-laser kuzoncipha kancane ngemuva kokuthi kusetshenziswe isikhathi eside. Yini imbangela yalokhu? Yiziphi izici eziyinhloko ezithinta ikhwalithi ye-laser yokumaka umshini ...
Ukukhethwa laser lokuqopha umshini
Eminyakeni edlule, umshini we-laser oqoshiwe ungenza kuphela umbhalo omncane oqoshiwe ngenxa yokulinganiselwa kobuchwepheshe. Ngokuvuselelwa okuqhubekayo nokuthuthuka kobuchwepheshe, umkhiqizo we-motherboard wokulawula ...